Ngaphansi kweNkanyezi efanayo, kaJohn Green, inoveli yokwazisa impilo. | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Abalobi, izinhlobo, Literatura, Izincwadi Zentsha, I-Novela
Ngaphansi kweNkanyezi efanayo, nguJonh Green.
Nanku umsebenzi ohamba phambili, oshukumisayo nobuntu. Ngaphansi kwenkanyezi efanayo ulandisa okuhlangenwe nakho kukaHazel Grace Lancaster, ibhungu elineminyaka engu-16 ubudala elihlushwe ngumdlavuza wegilo iminyaka emithathu. Ngesikhathi sokulandiswa kwemicimbi, lesi sifo sisesigabeni IV, ngakho-ke sesivele sisabalale saya emaphashini e-protagonist. Ukulwa nemiphumela ye-metastasis, odokotela banqume ukumhlola umuthi wokuhlola kuye.
Izincomo zokwelashwa zifaka ukulala isikhathi eside. Lapho uHazel engalele, uzitika ngokufunda incwadi ayithandayo Ukuhlupheka Kwasebukhosini. Ngezikhathi ezithile intombazane iya eqenjini lokweseka abantu abasha abanomdlavuza lapho ihlangana khona noGus, ahlanganyela naye ohambweni oluyingozi (ngenxa yezimo zakhe zempilo) nokuvula izinhliziyo zabo kungakhathalekile ukuthi zinjani izimo. Kulomsebenzi umfundi ubandakanyekile kule ndaba yothando lobusha, olubuhlungu futhi oluhle, ngomlayezo osobala wokwazisa impilo nabantu abakhona kuwo.
1.3 Yini eyaholela ekubeni abe ngumbhali
1.4 Inoveli edayiswa kakhulu ngo-2012
1.5 UJohn Green ku-Youtube
1.6 Umbhali nebhola
2 Ukuthuthukiswa kwesakhiwo sencwadi ethi Under the Same Star
2.1 Ukwelashwa okwashintsha impilo yakhe
2.2 Inoveli enabantu bangempela
2.4 Umlayezo wencwadi okufanele ubone
UJohn Michael Green wazalelwa e-Indianapolis, e-Indiana, e-United States, ngo-Agasti 24, 1977. Uyindodana endala kaMike noSydney Green, umfowabo omncane ubizwa ngoWilliam Henry Hank Green II. Eminyakeni embalwa yokuqala yena nomndeni wakhe babehlala eMichigan, bese kuba yi-Alabama, ekugcineni i-Orlando, eFlorida.
Waya eLake Highland High School e-Orlando. Uthole iziqu ngo-2000 eKenyon College ngezimbili eziphindwe kabili ezifundweni zesiNgisi nezenkolo. UJohn osemncane wayefuna ukuba ngumpristi, kodwa ngemuva kokusebenza njengomuntu oqeqeshwayo esibhedlela sezingane eColumbus, e-Ohio, wanquma ukuba umbhali.
Yini eyaholela ekubeni abe ngumbhali
Umsebenzi wakhe wokunakekela izinsana ezinezifo ezisongela impilo wamgqugquzela ngemisebenzi yakhe. Izincwadi zakhe zifaka: Ifuna i-Alaska (2005) futhi Ngaphansi kwenkanyezi efanayo (2012); Lesi sakamuva yinoveli yakhe ehlonishwa kakhulu, ukuthandwa kwaso kwamholela esikrinini esikhulu (2014). Isinqumo sakhe sokuba ngumbhali sisekelwe yimpumelelo yakhe, hhayi ngeze uGreen uphakathi ababhali abangama-20 abahola kakhulu ngonyaka ka-2014.
Inoveli edayiswa kakhulu ngo-2012
Ngaphansi kwenkanyezi efanayo kufinyelelwe ku- # 1 ohlwini oluthengisa kakhulu enyatheliswa yi New York Times ngoJanuwari 2012 (igama lokuqala lale noveli ngesiNgisi ngu Iphutha ezinkanyezini zethu). Empeleni, le noveli iphakathi kwezincwadi ezingama-20 ezithengiswa kakhulu ngekhulu lama-XNUMX. Eminye imisebenzi eyaziwayo yombhali yile Inala yeKatherinas (2006), Vumela iqhwa: Izinsuku ezintathu zeholide (njengombhali-mbhali) kanye Imizi yamaphepha (2008).
UJohn Green ku-Youtube
Ngokunjalo Ngo-2007 umbhali waqala isiteshi se-YouTube iVlogBrothers, kanye nomfowabo, bagxila ochungechungeni lwezemfundo. Eminyakeni eyishumi kamuva, le akhawunti isivele inababhalisile abangaphezu kwezigidi ezi-3 nokubukwa kwezigidi ezingama-700. Njengamanje unezingane ezimbili, uHenri no-Alice, umkhiqizo womshado wakhe noSara Urist.
Uyalithanda ibhola likanobhutshuzwayo; umsekeli othembekile weLiverpool FC futhi ungumnikazi wabambisene neWimbledon FC wesigaba sesithathu seNgilandi. UJohn Green watholakala enesifo sokucindezela ngokweqile. Unikeze umbono wakhe futhi uxoxe kabanzi ngalesi sifo esiteshini sakhe se-YouTube ukuze azise umphakathi jikelele futhi anikeze ukwesekwa kwabanye abathintekile.
Ukuthuthukiswa kwesakhiwo sencwadi ethi Under the Same Star
Ukwelashwa okwashintsha impilo yakhe
Ngemuva kokuhlushwa umdlavuza iminyaka emithathu, lo protagonist oneminyaka engu-16 uphoqeleka ukuba aye eqenjini lokwelashwa nokwesekwa kwabantu abaphethwe yilesi sifo. UHazel Grace Lancaster wemukela ngokungananazi izinkomba zikanina.
Ngenkathi eseqenjini lokwelashwa uhlangana no-Augustus 'Gus' Waters oneminyaka engu-17, othethelelayo ngemuva kokunqunywa umlenze ngenxa yesimila esibi.
Intshiseko kaGus nethonya lakhe lempilo limthakazelisa kakhulu uHazel. Kusobala ukuthi ukhangwa nguye, futhi bobabili nakanjani bathandana, yize bazi ukuthi konke kuzophela ngokudabukisayo, noma kunjalo, bathatha umlando wabo. Yize ubudlelwano babuzobhujiswa kwasekuqaleni, uGus ukwazile ukukhanga uHazel.
Umfundisa indlela "yaphakade enezinsuku ezinezinombolo", okushintsha ngayo isimo sakhe ngempilo. Bobabili banquma ukuya e-Amsterdam ukuyohlangana nombhali wencwadi abayithandayo, Ukuhlupheka Kwasebukhosini. Lapho ubuhlobo babo buyachuma futhi bafunda ukuthi impilo kaningi kunzima ukubhekana nayo - umdlavuza noma awunawo umdlavuza.
Inoveli enabantu bangempela
Okuthile okuvelele kule noveli ukujwayeleka kwabalingiswa bayo, akukho lutho olunehaba. Abalingisi abaphambili bathanda imidlalo yevidiyo enobudlova, kanye nezincwadi noma ama-movie agcwele izithombe ezingavuthiwe, nabantu abasikwe izicucu nemizimba eboshiwe. Kwesinye isikhathi bazitika ngokudla nokuphuza. Njengoba uHazel noGus bethandana, uGreen uchaza kafushane lapho benza uthando (ngokuphepha).
UHazel noGus bayakuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuzibophezela ngezinqumo eziyinselele nezixakile abazenzile. Kulo mongo, umfundi uthintwa yile ndaba yezinkondlo, ehlakaniphile, ehlekisayo futhi egcwele izindaba ezinhle zothando, noma ngabe kusobala ukuthi alikho ithuba lokuba nesiphetho esijabulisayo.
Ngalo msebenzi, uJohn Green wephula inhliziyo yomfundi ezikhathini eziningi, ukukhiqiza izinyembezi nokumamatheka ngasikhathi sinye ngenxa yomuzwa kaHazel wokulangazelela impilo 'yesikhathi esilinganiselwe'. Uphoqeleka ukuthi avuthwe esemncane, yize esencane ebusheni bakhe.
Ngokunjalo, umbhali ushiya ukucabanga okuthile okukhona ngenani lomzuzu ngamunye nokuphila esikhathini samanje. Kodwa-ke, abafundi ababucayi bangahle bangakhululeki ngempikiswano yombhali, njengoba ukulandisa kufaka izincazelo ezicacile zempilo yansuku zonke yomuntu onomdlavuza.
UHazel unokuhlangenwe nakho okusondele ekufeni okubangela ukucindezeleka okukhulu nengxoxo phakathi kodokotela nomndeni ngokwelashwa kwakhe. Kwesinye isenzakalo, ubheke uGus ngenkathi ehlanza ngenkani; futhi lapho kukhonjiswa ukuthi ukwazisa umzuzwana ngamunye ndawonye akunakuxoxiswana ngakho. Ngokuhamba kwesikhathi abalingiswa balahlekelwa wulawulo lwamehlo abo, imilenze yabo nobuntu babo.
Umlayezo wencwadi okufanele ubone
Izimo zikaHazel zikhombisa ukucabanga komuntu ofayo nokuthi kunjani ukulahlekelwa ngumuntu omthandayo. Noma kunjalo, Uhlangothi olunamandla kakhulu lwesakhiwo sonke yisinqumo se-protagonist sokuthanda nokuthandwa, ngokwazi ubuhlungu obungaletha.
Akunakwenzeka ukuthi ungazizwa uzwela ngomuntu onjalo onesibindi futhi oqotho. Ngaphansi kwenkanyezi efanayo Kungumsebenzi ohlukile kaJohn Green. Impela, lena yincwadi okufanele ibonwe, enye yezinto ezihamba phambili ohlotsheni lwamanoveli wentsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » izinhlobo » Ngaphansi kwenkanyezi efanayo